Xavi Hernandez oo sheegay sababtii uu isaga diiday qabashada xilka macalinnimo ee kooxda Barcelona – Gool FM
Xavi Hernandez oo sheegay sababtii uu isaga diiday qabashada xilka macalinnimo ee kooxda Barcelona
(Barcelona) 06 Juun 2021. Waxaa ugu dambeyn soo dhammaatay dooddii ahayd shaqsiga noqon doona macallinka xiga ee Barcelona xilli ciyaareedka 2021-22 kaddib markii madaxda naadiga reer Spain ay go’aansadeen inuu kooxda sii hoggaamiyo Tababare Ronald Koeman kasoo markii hore shaki badan la gelinayay mustaqbalkiisa.
Si kastaba ha ahaate, Xavi Hernandez oo lala xiriirinayay inuu baddel u noqon karo Koeman ayaa sheegay sababtii uu isaga diiday qabashada xukunka qolka lebiska ee Barca, isagoo u arkay inay tahay mid degdeg xambaarsan.
“Nasiib wanaagsan iyo nasiib darraba, laba jeer ayaan “maya” ku iri Barcelona sababo kala duwan awgood ay ka mid yihiin qoyska, xirfad ahaan iyo qandaraas ahaanba” ayuu Kabtankii hore ee Barcelona u sheegay La Vanguardia.
“Dabcan, aad ayay u adkeyd inaan diido, maxaa yeelay waxaan ahay taageere Barcelona, balse waxay ahayd xilli ay ku habbooneyd inaan diido” ayuu hadalkiisa kusii daray.
Macallinka kooxda Al-Sadd haatan hoggaamiya ayaa waqtigiisii ciyaaraha inta ugu badan kusoo qaatay Camp Nou isagoo khadka dhexe kubbad ka maamuli jiray, waxaana loo arkaa macallinka mustaqbalka ee Barcelona, inkastoo uu haatan sheegay inaysan deg deg ku jirin.
Xavi ayaa sidoo kale sheegay inay xubno ka mid ah Barca ku sugayeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Barcelona markii uu dalkiisa usoo aaday fasaxiisa xagaaga, hase ahaatee, waxa uu sheegay inaysan deg deg jirin, sidoo kalena uu xushmad mudan yahay macallinka waqtigan leyliya Blaugrana ee Ronald Koeman.
Wargeyska Mirror oo baahiyay inay Manchester United tallaabo horumarineed u qaadday saxiixa Jadon Sancho... (Maxaa soo kordhay?)